Tablets ngoba pressurization kanye nezinye izindlela hypotension
Kukhona amaphilisi ehlukahlukene ukukhulisa ingcindezi. Futhi amalungiselelo akhethekile ehlose ukuqeda ngeziphambeko, usebenzisa izindlela ezahlukene, ngenxa kokuthola ingcindezi ukwanda okuyinto eyenzeka njengoba side effect.
Isetshenziswa inhloso yazo, izibhebhe ezinjalo ukuze basicindezele ngokuthi "Angiotensinamide" "Midodrin". Lezi amalungiselelo vasoconstrictor umphumela futhi ube nenombolo yemiphumela emibi njengoba bradycardia, ukujuluka, ukuchama iziyaluyalu. Kufanele kusetshenziswe ngokuqapha ukuhluleka kwenhliziyo, isifo sezinso, arrhythmias.
Izimo aphume ashone sokukhulelwa, isifo semithambo wemikhawulo, adenoma ka wendlala, ukufiphala kwamehlo.
Pressurizes le amalungiselelo kungenzeka izidakamizwa ezivamile, izakhiwo zazo odinga ukukwazi, ikakhulukazi kubantu abaphethwe ngomfutho ophakeme ukuze kuholele ezengeziwe izindlela ethola lwenzeke kuzuba ezingeni esibucayi.
Le mithi ihlanganisa non-steroidal izidakamizwa eqeda ukuvuvukala angathengwa nge kadokotela futhi ngaphandle kwalo. Zisetshenziswa okudambisa ubuhlungu, ukunciphisa ukuvuvukala. Nokho, ngaphansi kwethonya lezi izidakamizwa ekuqongeleleni uketshezi kwenzeka emzimbeni futhi yehlise umsebenzi kwezinso. Futhi imiphumela emibi, efana amaphilisi senyusa izinga lomfutho womoya kungaholela gxuma abalulekile. Phakathi kwezidakamizwa zibala "naproxen", "ibuprofen", "aspirin". Lezi zimali kungenzeka zifakwe neminye imithi ngaphandle kadokotela. Ngakho-ke kubalulekile ukufunda ngokucophelela imiyalelo izidakamizwa.
Esebenzisa pressurizes, zihlanganisa kunemithi noma amaphilisi owaphuzayo ngoba abandayo nokukhwehlela, okuyinto ngaphandle yokuvula amakhala antiinflammatory elakhiwa izingxenye anomthelela ukwandisa wegazi nokushaya kwenhliziyo kuyehla. Ngakho-ke, ukuthatha imithi ekhwehlela kanye imikhuhlane, kubalulekile ukuba acabangele lo mphumela.
Njengoba ithebhulethi kwandise ingcindezi yokufuna, kungaba ukwandisa yokwelapha ikhanda migraines. Banezinhliziyo izitsha enkulu ekhanda isenzo okuvimba ubuhlungu. Nokho, ngesikhathi esifanayo ayisesemikhulu imithambo wonke umzimba, futhi ukucindezela ongafinyelela sezingeni eliyingozi. Ngezinye ingcindezi ongaphakeme angasebenzisa ngokuphepha lezi imithi, ngaphandle kwalokho isidingo sokuya kudokotela.
Kwandisa isenzo ingcindezi nilidle izidakamizwa elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, yokwamukela okungase zibulale ukusebenza inhliziyo. ukuthaka imithi ngendlela zakhe ezinjengethi, "Sibtramin" ( "Meridia"), kungase kwandise kancane ingcindezi, kodwa lokhu kwanele yingozi kubantu isifo senhliziyo nomfutho wegazi ophezulu kanye.
izidakamizwa Iphango-abacindezela uthanda uzozala umzimba, okuholela umthwalo anda inhliziyo futhi ingcindezi iyakhula. La mathuluzi kungabangela kungalimaza kakhulu kunokuba kusize. Ngaphambi reception yabo kufanele kudokotela.
Uma uhlangabezana izimpawu of umfutho ophansi wegazi, isibonelo, ubuthakathaka, lightheadedness, kulezi zimo, kudingeka nje ithebhulethi a ingcindezi ongaphakeme. Lezi zihlanganisa "Norepinephrine", "camphor", "Dobutamine", "Mezaton", "Strofantin". Ngaphansi kwalezi zimo, ungathatha isigamu askorbinki tablet futhi ezimbili - green tea ezomile.
Ngaphandle amaphilisi ukuze basicindezele, ungakwazi uphuze inkomishi yetiye noma ikhofi, yidla okunosawoti ukuphuza ugologo tonic. Medicine Okuyimvelo: ginseng, magnolia, Eleutherococcus, Leuzea ifa kunesidingo isinyathelo-up isinyathelo. Bounce kusiza 35-40 amathonsi tincture.
Kungcono kunokusebenzisa itiye noma ikhofi, ingxube yamanzi engokwemvelo emhlophe juice e isilinganiso 2 ukuze 1. Kuyokusiza low-ingcindezi, ugologo ingilazi.
Umuthi 'Azinoks ": yokusetshenziswa
Kungakanani wamaphaphu umthamo ngokwesilinganiso?
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka Internet
I-self-education iyinjini yentuthuko kanye ne-catalyst eyinhloko yokuthuthukisa ubuntu